Afaan oromo - AFAAN OROMOO
Home ODUU AFAAN OROMOO
Dargaggoonni Dhaabbiilee barnootaa ol'aanoo fi Koollejjoota irraa ba'an guddina diinagdee biyyattii keessatti ga'ee isaanii ba'aa jiru jedhame.	Tuesday, 21 May 2013 15:50	eskinder	[Finfinnee, Oromiyaa 13 09 2005]Hawaasni hirmaanaa Misoomaa fi Bulchiinsa gaarii mirkeessuu keessatti jalqabe cimsee itti fufuu akka qabu, Pireezidaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Alamaayahu Atoomsaa beeksissan. Jilli Pireezidantii Alamaayahu Atoomsaan durfamu, Hojiiwwan Misoomaa fi bu'uuraa Intarpiraayizii Maayikiroo fi Xixiiqqaa Magaalaa Bishooftuu keessatti hojjatamaa jiran daawwateera. Waldaalee nyaata lukkuu oomishanii fi hojii mukaa si magaalattii keessatti argaman kan daawwatan Pirezidaanti Alamaayyoon Waldaaleen kunniin kallattii karooraa Intarpiraayizii Maaykiroo Xixiqqaa kaa'ameen deemaa kan jiran ta'uu dubbatan. Dargaggoonni Dhaabbiilee barnootaa ol?anoo fi Koollejjootarraa eebbifamanii ba'an waldaan gurmaa'anii hojii qabatamaa keessa galuun guddina diinagdee biyyaatiif gahee isaanirraa ba?a akka jiranii fi milkaa'ina kanaaf Mootummaan deegarsa barbaachisu kan godhu ta'uu himan. Akaaluu Baqqalaatu gabaase.
Biiroon Haqaa Oromiya leenjii tajaajila haqaa si'ataa fi qulqullina qabu hawaasaf kennuuf kan dandeessisu hojjettoota isaaf kennaa jira.	Tuesday, 21 May 2013 15:48	eskinder	[Finfinnee, Oromiyaa 13 09 2005]Biiroon Haqaa Oromiya leenjii tajaajila haqaa si'ataa fi qulqullina qabu hawaasaf kennuuf kan dandeessisu hojjettoota isaaf kennaa jira. L...
Manni marichaa eenyummaa sab-lammootaatiif xiyyeeffannoo kennuun hojjiechaa jira	Tuesday, 21 May 2013 15:12	eskinder	...
Lakkoofsi shakkamtoota 50 akka ga’e himame	Tuesday, 21 May 2013 15:09	eskinder	Abukaatoonni shakkamtootaa hanga yoonaatti maamiltoonnisaanii mirga heera mootummaatiin goonfatan fayyadamaa hin jiran waan jedhaniif dhaddachichi keessumattuu koomishiin...
Guutuu biyyaatti lafti misooma jallisiitiin misoomuu danda'u hektaarri miiliyoonni 3.7 akka jiru Ministeerri Qonnaa beeksise.	Monday, 20 May 2013 16:13	eskinder	[Finfinnee, Oromiyaa 12 09 2005]Guutuu biyyaatti lafti misooma jallisiitiin misoomuu danda'u hektaarri miiliyoonni 3.7 akka jiru Ministeerri Qonnaa beeksise. Guutuu biyya...
Godina Baaleetti Biqiltuun bunaa dhukkuba dandamachuu danda'an miiliyoonni 8.6 ol dhaabamee akka jiru Waajjirri Misooma Qonnaa Godinichaa beeksise.
Walta'uumsi Itiyoophiyaafi Ijipti cimee akka itti fufu himamame
Shakkamaan poolisiidhaan barbaadamaa turan Magaalaa Shaashamnneetti qabaman
Jaappaan misooma qabeenya uumamaatiif Doolaara biliyoona 2 ramadde
Maxxansaalee adda addaa fi qophiilee dokimantariiwwan kan feenu waan ta'eef akka hordoftan isin affeerra!!!	Latest News Oromic
Dargaggoonni Dhaabbiilee barnootaa ol'aanoo fi Koollejjoota irraa ba'an guddina diinagdee biyyattii keessatti ga'ee isaanii ba'aa jiru jedhame.
Biiroon Haqaa Oromiya leenjii tajaajila haqaa si'ataa fi qulqullina qabu hawaasaf kennuuf kan dandeessisu hojjettoota isaaf kennaa jira.
Manni marichaa eenyummaa sab-lammootaatiif xiyyeeffannoo kennuun hojjiechaa jira
Lakkoofsi shakkamtoota 50 akka ga’e himame
Guutuu biyyaatti lafti misooma jallisiitiin misoomuu danda'u hektaarri miiliyoonni 3.7 akka jiru Ministeerri Qonnaa beeksise.
Hayyuun siyaasaa paakiistaan takka rasaasaan ajjeefamte
Ministeerichi ogeeyyoota sab quunnmatii wajjin mari’ate
Daandii Asfaaltii kiloo meetirri 76 xummuramuun eebbifame
Oromiyaatti ijaarsi dhaabbelee fayyaa adeemsifamaa jira
Shakkamtoonni malaammaltummaa har’a mana murteetti dhiyaatu
No of Vistors visited the site since dec 27,2010 : 5355839